कैलालीमा सवारी दुर्घटना :' २ को मृत्यु, ५ घाइते ' - Demo Khabar
धनगढी, कात्तिक । कैलालीका छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कैलालीको चिसापानीमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा लम्कीचुहा नगरपालिका १ का रङप्रसाद न्यौपानेको मृत्यु भएको छ ।
सुप प्र ०१००८ प १६२५ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा घाइते भएका न्यौपानेलाई उपचारका लागि लम्कीस्थित लाल रत्न अस्पताल लगिएको थियो ।
त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि टीकापुर लैजाने क्रममा बुधबार राति उनको मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकलको पछाडि सवार लम्कीचुहा नगरपालिका १ कै ३९ वर्षीय जयप्रकाश न्यौपाने र ५० वर्षीय जन्मजय न्यौपाने घाइते भएका छन् ।
बिहिवार, कार्तिक ६ २०७७१०:१५:१३
चालु आ. व. को पहिलो चार महिना : "घट्यो आयात, बढ्यो निर्यात "